Ucela uxhaso lokufukula ikhono umbhali Ongafisa ukusiza uMthembu angamshayela ku-078 373 4664. >> | News24
Ucela uxhaso lokufukula ikhono umbhali Ongafisa ukusiza uMthembu angamshayela ku-078 373 4664. >>
ISITHOMBE:NOMPENDULO NGUBANE Umbhali wezincwadi waseSobantu uSamkelo Mthembu ufisa ukuthola uxhaso ukufukula ikhono lakhe lokubhala.
UCELA uxhaso ukuze akwazi ukushicelela incwadi yakhe umbhali wezincwadi waseSobantu okholelwa ukuthi ukubhala kwakhe kusezingeni eliphezulu.
USamkelo Mthembu (31) kumanje ubhale incwadi esihloko sithi “Amatriplets” lapho ekhuluma khona ngezingane zabafana ezintathu ezabelethwa kanyekanye kodwa zadukelana, zakhulela emindenini eyahlukene.
Uthe into emenze wabhala le ncwadi wukuthi baningi abantu noma abantwana abazalwa ezimeni ezicishe zifane nalezi abhale ngazo incwadi. Phezu kwalokho uMthembu uthe yena uye abuke izimo eziningi bese lokho kumnika umqondo wokuthi abhale ngazo.
“Ukubhala yinto engiyithanda kakhulu kusukela ngesikhathi ngikhula ngisewumntwana. Ngikhule nasesikoleni ngiwumuntu obethanda kakhulu ukubhala, lolo thando yilona olungenze ngafuna ukuqhubekela phambili ngibhale futhi ngizibone ngikude kakhulu. “Kuthe noma sengingasafundi ngaqhubeka futhi ngabhala sengizihlalele ngoba nginentshisekelo nothando lokubhala.
Omunye umuntu uzozibuza ukuthi kungani ngikhetha ukubhala ngolimi lwesiZulu. Lokhu kungenye yezindlela yokuqhakambisa ulimi lwethu nendlela yokuthi siziqhenye ngalo,” kubeka uMthembu.
Ngokwencwadi laba bafana bazalelwa ezweni lase Tanzania nokuthe nokuqhubeka kwezimpi kulona izwe lase Tanzania baphoqeleka ukuthi beze lapha ezweni lase Ningizimu Africa.
Echaza kabanzi ngele ncwadi yakhe uMthembu uthe angafisa ukuthola uxhaso lokuthi incwadi yakhe ishicilelwe. “Ngingafisa ukuthi ngiyibone ifundwa futhi idayiswa [ezikoleni] ezitolo zezincwadi. Ngiyacela ukuthi noma ubani ongaba nosizo ekutheni le ncwadi ithole ukushicilelwa afake isandla noma ngayiphi indlela. “Ukuba kwami umbhali kwabe kuyiphupho lami. Engikudingayo nje isiqalo ukuze ngikwazi ukuqhubekela phambili. Ngizimisele ukuwamukela usizo noma iluphi oluqhamukayo, ngisho ngabe uqeqesho oluzongisiza ukuze ngikwazi ukubhala,” kusho uMthembu.
Lo mbhali uphinde waveza ukuthi usanda kuqeda ukubhala enye yezincwadi zakhe esihloko sayo sithi “Unyendle”.